သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): March 2017
(30 March 2017, Thursday)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:334comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 09:45 No comments:
သူကြီးမင်း၊ မျှော်ခြင်း ဗောဓိပင်။
နိမိတ်ဖတ်၊ ပင်မြတ်ဗောဓိပင်။ ။
(၁၂ အောက်တုိုဘာ ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 20:05 No comments:
ပျော်ပျော်ဆင်နွှဲ၊ ကျောင်းဖွင့်ပွဲ။ ။
(၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:35 No comments:
(၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:34 No comments:
(၁၀ ဇူလုိုင် ၂၀၁၄)
ရွှင်ပျော်မြူး ညီပုံ ဤပုံ
(၂၈ ဇွန် ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:33 No comments:
(ဇွန် ၁၆ ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:30 No comments:
ကုသိုလ်တွေပေး၊ ပညာရေး၊ မျှော်တွေး ၀မ်းတွေသာ။
အဲဒါမှ အမုန်းမပွါး အပြုံးများ တုံးဖလား ငါတုို့ရွာ။
(၁၀ ဇွန် ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:29 No comments:
(၆ ဇွန်လ ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:28 No comments:
(၅ ဇွန်လ ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:27 No comments:
ဂျစ်တူးမုံရွာ လျှိုးမှာထားလုို့
(၂၂ မေလ ၂၀၁၄)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:25 1 comment:
အပင်ပေါက်ကုို သ လုို့ထားတယ်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:23 No comments:
(၂၉ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:39 No comments:
ကောင်းခြင်း ဆုိုးခြင်း မလုိုဘူး
ကောင်းကျိုး ဆုိုးကျိုးလဲ မလုိုဘူး
အဲဒီ အချက်တွေ သဘောကျလွန်းလုို့။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:37 No comments:
ဘယ်သူ့မှ အမှု မပတ်စေရဘူး။
(၂၈ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:35 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:34 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:33 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:31 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:30 No comments:
(၂၇ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:28 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:26 No comments:
(၂၆ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:25 No comments:
အမှန်က ချစ်ချုပ်စု ပါ။
စုဘူးနှောင်အိမ်ထဲ လှောင်ထားတာကုို ပြောတာ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:23 No comments:
ဖြေလေ (UK Day Light Saving)
သင့်အား မေးခွန်းတစ်ခု မေးအံ့
ထုိုမေးခွန်းမှာ အလွန်ပင် ရုိုးရှင်းလွယ်ကူလှပေ၏။
ရက်တစ်ရက်မှာ အချိန်နာရီပေါင်း မည်မျှရှိသနည်း ဟူလုို။
အများနည်းတူ ယေဘုယျသဘောသုို့ လုိုက်ကာ
ရက်တစ်ရက်မှာ အချိန်နာရီ ၂၄ နာရီ တိတိ ရှိပါသည်ဟု
တက်တက်စင် လွဲချော်နေသော အဖြေဖြစ်သည်ကုို
သိလုိုပါက လေ့လာမှတ်သား ပွါးများကြကုန်လော့။
ကုိုယ်မှန်သည်ဟု မှတ်ယူထားသည့် အဖြေအား
အမှားဟု ထောက်ပြပြောဆုိုလာသော သူအား
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:21 No comments:
(၂၅ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:19 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:17 No comments:
(၂၄ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:16 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:15 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:14 No comments:
(၂၃ မတ်လ ၂၀၁၇)
....၀ယ်ဖတ်...၀ယ်ဖတ်... :D :D :D
အထဲဝင်လုို့ နှုတ်ရခက်တတ်တယ်။ :D :D
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:12 No comments:
စားဖုို့ အချိန် မရောက်သေး။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:11 No comments:
(၂၂ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:10 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:09 No comments:
ပန်းငံ့သူတို့အောင်ပွဲတည်း။
(၂၁ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:08 No comments:
ဒဂုံမြေ၀ယ်၊ အိမ်လုံး ကွယ်
အချင်းများ ဟေ့ အချင်းများ။
တုို့ဌာနေ ဗျို့တုို့ဌာနေ။
(၁၉ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:06 No comments:
(၁၈ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:05 No comments:
(၁၇ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:04 No comments:
ပြောင်းဖုို့ဆုို ပြောင်းဖုို့ ပြင်ထား။
နှောင်းသမျှ ပြောင်းဖုို့ ပြင်တယ်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:03 No comments:
အမြဲ စွာ လွဲမာန
ငရဲခန်းဆုို၊ ကြိုလို့ ပုိ့ထား။
မဲညို့ ခြယ် ဟိတ်များသဟာမုို့
(၁၅ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:02 No comments:
ကွဲယုတ်စေ ကွဲဖို့ လေထွား။
(၁၄ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:01 No comments:
(၁၁ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:57 No comments:
ကျွန်တော်မျိုး ကျွန်မမျိုးတုို့သည် အနှစ်နှစ်အလလက မှန်းရမ်းမျှော်မှန်းထားခဲ့ကြသည့် စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ကြီး ဘွားကနဲ ဘွင်းကနဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေါ်ပေါက်လာပါစေခြင်းအကျိုးငှာ
စေတနာသုံးတန် အသကုန် ယုိုစီးသွန်၍ မောင်သာသနာ မယဉ်ကျေး မယ်သင်္ကြန်တုို့ကုို မရမ္မလောက တိဘ၀သခင် ပြည့်သျှင်မင်းဖုရားအား လုံးလုံးလျားလျား ၀ကွက်အပ်၍ ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်နှင်းလှူဒါန်းပါ၏ အသျှင်ဖုရား...။
ဤမောင်သာသနာ မယဉ်ကျေး မယ်သင်္ကြန်တုို့ကုို
အသျှင်မင်းဖုရား ဆန္ဒတော်အတုိုင်း သွန်လုိုသွန် မှောက်လုိုမှောက်
ချီးမြှောက်လုို ချီးမြှောက် အပြီးဖျောက်လုိုဖျောက် နောက်မတွန့် ကြောက်ရွံ့တော်မမူပါလင့် အသျှင်မင်းဖုရား....။
စုိုက်ပျိုးလုိုက စုိုက်ပျိုး၊ ရုိုက်ချိုးလုိုက ရုိုက်ချိုး၊ အမျိုးနှောလုိုက နှော၊ သူခုိုး ရောလုိုက ရော၊ အကျိုးလုို၍ ပြောပြော၊ အဆုိုးလုို၍ သောသော၊ ရွှေရောရော ကျောက်ရောရော သဘောရှိ ကရောဟိတော်မူပါ အသျှင်မင်းဖုရား...။
ဤသုို့ အပ်နှင်းလှူဒါန်းရသော စေတနာတုို့ကြောင့် ကလေးအစ ခွေးအဆုံး အားလုံးက သိမ်းကြုံးမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည့် စိတ်ကူးယဉ် ဘုံဗိမာန်အိပ်မက်ကြီး
ဟီးကနဲ..ဟားကနဲ...ဘွားကနဲ..ဘွင်းကနဲ...ဗြုန်းကနဲ...၀ုန်းကနဲ...အုန်းအုန်းကျက်ကျက် ဂျုန်းဂျုန်းဂျက်ဂျက် အမြန်ပေါ်ထွက်ရပါလုို၏ အသျှင်မင်းဖုရား...။
ထုိုအိပ်မက်ကြီး မပေါ်ထွက်မီ ကြားကာလ၌ ဟုိုနားဒီနား ဟုိုသွားဒီသွား ကုို့ရုို့ကားယား ယီးတီးယားတားဖြင့် ကျက်စားကျင်လည်၍ မျက်နှာငယ်ဘ၀ ရခဲ့ကြသည်ရှိသော် ပြည်တွင်းစစ်ဘေး ပြည်ပစစ်ဘေး မုဒိမ်းဘေး လူသတ်ဘေး ဓားပြဘေး သူခုိုးဘေး ရေဘေး လေဘေး မီးဘေး ဗုံးဘေး လောင်ချာဘေး မူးယစ်ဆေးဘေး ရောဂါဘေး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ဘေး မတရားဘေးအစရှိသော ဘေးအမျိုးမျိုး ရန်အမျိုးမျိုး အန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ရန်စွယ်အမျိုးမျိုးတုို့မှလည်း လွတ်ကင်းရပါလုို၏ အသျှင်မင်းဖုရား...။
ဤကောင်းမှု၏ အဖုို့ဘာဂကုို (၁၈၂၄-၂၆) အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲမှစ၍ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတုိုက်ပွဲအလယ် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအဆုံး တဘုံးဘုံး ကျဆုံးခဲ့ကြကုန်သော သာသနာ့အာဇာနည် လူအာဇာနည် တိရစ္ဆာန်အာဇာနည်အားလုံးတုို့အား အမျှပေးဝေပါ၏ အသျှင်မင်းဖုရား။
ဟုိုအရင်က စ၍ ယနေ့ညတုိုင်အောင် ကြိုကြားကြိုကြား၌ ပယောဂအမျိုးမျိုးကြောင့် အသက်ဝိညာဉ် လွှင့်စင်ပဲ့ထွက်သွားကြကုန်သော သားသုံးသားနှင့် ပြည်သူပြည်သားတုို့အားလည်း အမျှပေးဝေပါ၏ အသျှင်မင်းဖုရား။
အနှစ်နှစ်အလလက စုန်းစုန်းမြှုပ် ပျောက်ကွယ်လွှင့်ပါးသွားခဲ့ကြသော
ဖဆပလ မဆလ န၀တ နယက မထသ အစရှိသော မရဏဘ၀တုို့အားလည်း အမျှပေးဝေပါ၏ အသျှင်မင်းဖုရား။
အားလုံးကုန်သော ကြားကြားသမျှသော မြင်မြင်သမျှသော
ပုပုကွကွ နုနုယွယွ မရှုမလှ ကညုကလျ ဟုိုပြဒီပြ နာနာဘာဝ ၀ိနာဘာဝတုို့သည်
ကျွန်တော်မျိုး ကျွန်မမျိုးတုို့ အပ်နှင်းလှူဒါန်းရသော စေတနာ၏ အဖုို့ဘာဂကုို နေ့ချင်းညချင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရကြသည်ဖြစ်၍ ထက်အောက်နှစ်ဖြာ လုံခြုံစွာ ဖုံးအုပ်နုိုင်ကြပါစေသော်ဝ်။
အားလုံးကြားကြားသမျှ ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀ လှကြပါစေကုန်လော့..... သာဓု သာဓု သာဓု (၃ခါဆုို)။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:55 No comments:
(၁၀ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:54 No comments:
(၉ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:53 No comments:
ပေဖုို့ နေရာ ရှာကြတယ်။
လေဖုို့ နေရာ ရှာကြတယ်။
သေဖုို့ နေရာ ရှာကြတယ်။
(၇ မတ်လ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:52 No comments:
(၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:48 No comments:
(၉ ဇန်ဝါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:45 No comments:
စကားကျွံရင် ပြန်နှုတ်လုို့မရ" တဲ့
(၉ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:44 No comments:
တုို့ ဘုရားလဲ ဟောကြားခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ထုိုင်စောင့်ရင်း အချိန်ဖြုန်းဖုို့ မဟုတ်
စာသားက ညီချင်တယ် မရှိ။
(၈ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:43 No comments:
သင့်တဲ့နေရာမှာ ထားသလုို နေ
ပ စားမှု မပေးပေမဲ့
အခ စားတော့ ၀င်နေဆဲပါပဲ။
(၇ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:41 No comments:
(၆ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:40 No comments:
အရွက်တောင် ကောင်းကောင်း မဝေရရှာပါဘူး။
(၅ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:39 No comments:
(၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:38 No comments:
(၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:37 No comments:
(၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:34 No comments:
(ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ၂၀၁၆)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:33 No comments:
(၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆)
Kids, expecting their mother would be bringingaspecial Christmas meal for them, are waiting for her return home to celebrateaChristmas party!
Mother, expecting her starving kids would be waiting for her return home withabig meal, is waiting for the meal nearbyacreek.
A group of family members are swimming and performing dances by group in celebration of Christmas Event in the water. They are getting closer, closer and closer to the kids' mother.
That is the way we celebrate the "Christmas Party"..
(ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ၂၀၁၆)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:32 No comments:
(၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:31 No comments:
(ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ၂၀၁၆)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:29 No comments:
(၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:28 No comments: